Regedza kudya zviwitsi - siya shuga nenzira kwayo
Maswiti akawanda atinodya, iko kushuvira kweswiti kwatinowana, uye nekuwandisa kweshuga yekudya - muchimiro chekuita kunge chisina kukuvadza: makeke, zviwitsi, makuki, majusi ekugadzira, shuga zvinwiwa zvine shuga - zvinokonzeresa njodzi yekutarisana neyakareba- term uye pfupi-mhedzisiro mhedzisiro yeshuga yakawandisa, uye inosanganisira kukanganisa kwekusiyana kwekunetseka.
Iko mukana wehosha yemoyo inowedzera;
Mukana kukura chirwere cheshuga;
Mafuta akawandisa uye njodzi dzakabatana handiyo yega mhedzisiro inogona kuitika kune avo vane zino rinotapira.
Maonero haana tariro, asi mamwe anogona kudzoserwa uye mamwe anogona kudzivirirwa nekubvisa shuga, kana kutanga kudzikisa huwandu.
Hazvisi nyore nguva dzose kusiya maswiti, kana kudzikisira huwandu, kashoma chero kupindwa muropa kunopera pasina zviratidzo zvekusiya - zvishuwo zvine simba zvihwitsi, kutemwa nemusoro, kushushikana, kuneta - sekutonga, vanotanga kudzikira mushure mevhiki, kana kubata kunze kwemamwe mavhiki maviri kana matatu - izvi zvinoenderana nekuti maswiti mangani aikunda mumararamiro ako apfuura (wakawandisa sei shuga). Izvi hazviwanzo kuve dambudziko rakadai, asi funga nezvezviratidzo zveshuga kubvisa - kana uchityaira, uye panotarisirwa nekufungisisa.
Ndeipi nzira chaiyo yekusiya maswiti?
Iwe unogona kubvisa shuga mumatanho, chigadzirwa nechigadzirwa - warasikirwa netsika yezvinwiwa zvine shuga, kusabvisa inotevera, nezvimwewo, kana kuramba-kamwe-nguva kwakanyanyisa kwauri. Pano, sezvazviri mune zvese, zvirinani kuti usazvinyengere, uye kana zvichikwanisika kusiya shuga zvachose, saka zvinobatsira kurega, asi zvichave zvirinani kuti iwe uone zvekuita.
Zvekubatanidzwa zvirinani mukuita izvi - zvinodikanwa kuti unzwisise kuti nei uchizvida, zvakakosha kuti ude izvi - seimwe yesarudzo - unogona kunyora rondedzero uchinongedzera kwazviri kana zvakakosha uye kurudziro "zvadzimaidzwa" mundangariro.
Kana iwe ukangoerekana "wagumburwa" uye wotanga kudya zvinotapira zvakare, saka haufanire kushatirwa zvakanyanya. Dzidza kubva munzira, kunyangwe iyo nzira ipfupi, pura zvinyowani zvekutanga uye ramba uchirarama usina shuga. Paunenge wakadzikama uye wagadzirira, tangazve.
Panzira iyi zvakakosha dzivisa kupera mvura mumuviri, uye kuumbika: chikafu chinonzwisisika uye chakasiyana pasina shuga, chakapfuma mufibre, zvinovaka muviri, mafuta ane hutano, mapuroteni, yakachena (chitubu) mvura - izvi ndizvo izvo, kwete shuga, zvinoita kuti tiite: tinobereka, tine hutano, uye tinoshanda.
Fudza muviri wako (zvine mwero, chokwadika) nechikafu chakaringana uye chinovaka muviri - izvi zvinoderedza kudiwa kwekutora nzara, uye kudzikisira zvishuwo zvekudya zvinotapira uye zvisina hutano. Uropi hunofanira kunzwisisa kuti muviri uri pasi pesimba rawo, uye pachawo, une zvese zvinoita kuti uve nehupenyu, uye huropi, sezvo iri mushandi asinganeti (waanotenda zvikuru), uye pachezvayo inotyisa uye yakadzikama nyika inoshandisa 20% simba remuviri wese, uye kana izvi zvichishandiswawo nehuropi nemuviri (zvinova zvinodikanwa), ipapo mitengo yezvinhu zvinobatsira inokodzera, uye inoda kuzadzikiswa, uye shuga yekugadzira haisi mubatsiri pano, asi mutoro chete - zvese zvehuropi uye nemuviri ...
Sarudzo dzaungatanga nadzo kupa zvinonaka
Zvinwiwa zvinotapira - nemvura, kana iwe uchida kuchinja kuravira, wedzera kamoni kana mindi;
Zvibereko zvinotapira zvemangwanani - zvemazai akatsemurwa, hove, oatmeal nemichero, miriwo mitsva nemabriji;
Zvikafu zvinotapira - semuenzaniso, nzungu, miriwo, mazai akaomeswa, akasviba - izvo zviri nani kuzvibikira wega (kubva munyama nezvinonhuwira), iyo yakatengwa inogona kunge iine shuga yakawanda;
Panzvimbo pebhawa chokoreti yemadhizeti ... Une chokwadi here kuti hauna kuguta? Kwete, saka idya, semuenzaniso - chitsama chemichero yakaomeswa, maamondi, madheti, pistachios, walnuts kana mamwe marimu;
Ice cream - panguva yehusiku kurwisa kune firiji - yezvakanaka (zvakasikwa uye zvine huwandu hwakawanda) chizi nemiriwo, kottage chizi nemichero yakaomeswa kana nzungu;
Tsiva zvese zvinotapira uye zvinokuvadza zvakajairika - neshuga isina shuga, uye, kana zvichibvira, hutano. Zvakanyanya kukuvadza hazvisi nyore kuwana, uye muzviitiko zvakawanda hapana chikonzero chekuomesa zvakanyanya.
Ehe ... Ehe izvo zvinodikanwa kuti uwane kurara zvakakwana, hongu iwe unofanirwa kugara uine tariro. Naizvozvo, verenga mabhuku anonakidza, tarisa mafirimu akanaka, famba mumhepo nyowani, taura neshamwari pane dzakasiyana nhaurwa - kwete nezve custard nekirimu. Ah hongu ... "Muvhuro" waida kutanga kuita maekisesaizi uye kuenda kujimu? Une chivimbo muhutano hwako here? Uye makirasi haana kupesana iwe? Saka ikozvino inguva - hongu, Muvhuro unotevera zvakare zvinoita, asi ikozvino ndizvozvo.
Mushure mechinguva mushure mekudzikisira (kuramba) mumaswiti, unogona kunzwa zvirinani - kushomeka, mweya wako unovandudzika, uye simba rakagadzikana rinozoonekwa zuva rese. Zvishoma nezvishoma, chishuvo chemaswiti chinonyangarika, kune chishuwo chemadhiri uye mapuroteni. Muviri wako uri kuchinjika kuti uwane zvinovaka muviri kubva kune zvakajairwa chikafu izvo zvine zvishoma kana kwete (zvinova zvisingawanzo) shuga yekugadzira.
Maswiti anofanirwa kubviswa zvachose here?
Kwete mune zvese zviitiko zvinokurudzirwa kuzvitambudza nekurambwa kwakazara kwemaswiti, uchipukuta misodzi yemisodzi pakuona kwekuratidzira kesi ine madhiri. Zvibate iwe kune chinotapira kurapwa nguva nenguva - kana izvo zvichikukurudzira. Asi zvakakosha kuti unzwisise zvauri kubata nazvo - sekune zvimwe zvese, shandisa nzira inonzwisisika. Semuenzaniso ... Namatira kumutemo we80/20, uko makumi masere muzana chikafu, chikafu, chikafu chine hutano. Uye mune makumi maviri muzana ezviitiko (kamwe, kana kakati wandei pasvondo, pamwe kazhinji - kana zvishoma), gadzira "chinotapira kunze" - kana zvikasava dambudziko uye zvikasagumbura iwe.
Kazhinji, avo vakasiya shuga vanofara kwazvo nerusununguko kubva kupindwa muropa uku zvekuti havafungi kuti nei vachifanira kuzvidzorera zvese.
Sodium saccharinate: makomborero uye zvinokuvadza
Ishuga-isina chikafu charlotte - recipe
Acacia uchi: hunobatsira zvinhu uye contraindication
Kudya kune hutano pasina kukanganisa kune vane zino rinotapira
Chirwere cheshuga chinogona kurapwa?
Mibvunzo ye62 mu database yakagadzirwa mu 0,440 masekondi.